ICloud Private Relay iba yinto ye-beta kwi-beta yamva nje ye-iOS 15 | IPhone iindaba
ICloud Private Relay iba yinto ye-beta kwi-beta yamva nje ye-iOS 15
Ingelosi Gonzalez | | iOS 15, Izaziso
IApple iboniswe eWWDC 2021 inyanda yenoveli eqokelelwe phantsi ICloud +, entsha eyongezelelweyo kwilifu le-Apple. Ngaphakathi kwale seti yenoveli kuyinto ICandelo labucala le-iCloud, Inkqubo ekwaziyo ukwandisa imfihlo xa ukhangela i-Intanethi. Kuzo zonke iisoftware ze-betas ezipapashwe yi-Big Apple, umsebenzi ubonakale usebenze ngokungagqibekanga kwaye usebenza ngokupheleleyo. Nangona kunjalo, U-Apple uthathe isigqibo sokwenza i-iCloud yabucala ukuba ibuyiselwe kwi-beta kawonke-wonke ekhubazeke ngokungagqibekanga kwifayile ye- I-iPadOS beta 7 kunye ne-iOS 15.
1 ICloud Private Relay -indlela ekhuselekileyo nefihlakeleyo yokukhangela kwi-iOS, macOS, kunye ne-iPadOS
2 IOS 15 iya kukhutshwa kunye neli phepha njenge-beta kawonke-wonke
ICloud Private Relay -indlela ekhuselekileyo nefihlakeleyo yokukhangela kwi-iOS, macOS, kunye ne-iPadOS
ICloud Private Relay okanye ICloud Private Relay service yi inkqubo que ivumela ukugcwala kwabantu okushiya isixhobo sethu ukuba sibhalwe ngokufihlakeleyo. Oku kufezekiswa enkosi kulwakhiwo lwee-hop ezininzi apho zonke izicelo zivela kwi-iPhone okanye kwi-iPad zithunyelwa kwiingxelo ezimbini (ii-proxies). Enkosi kwezi ziitsiba zimbini, kuvunyelwe ukufihla ngqo i-IP apho sisebenza khona. Kodwa ukugcina ezinye izinto ezisisiseko zombuzo wethu njengendawo efanayo ukuqinisekisa ukuba iinkonzo zewebhu zisebenza.
Isiphelo kukuba idilesi ye-IP imele indawo ekuyo umsebenzisi kodwa idilesi ye-IP yokwenyani ifihliwe ngokwabelana ngedilesi engaziwa kwiiseva zewebhusayithi. Kwaye oku kuyenzeka indlela ekhuselekileyo nefihlakeleyo yokukhangela. Iingcali ezininzi ziye zathelekisa inkqubo neVPN. Nangona kunjalo, nge-ICloud Private Relay asikwazi ukufikelela nge-IP kwindawo eyahlukileyo. Kwaye ke, asinakho ukufikelela kumxholo onokuthintelwa. Yintoni eyenziweyo kukugquma i-IP ngolwazi lwendawo olufana nolokwenyani, olwahlulahlula kwiVPN yakudala.
ICloud Private Relay yinkonzo ekuvumela ukuba uqhagamshele phantse kuyo nayiphi na inethiwekhi kwaye ukhangele kwi-intanethi ngeSafari ngendlela ekhuselekileyo nengasese. Iqinisekisa ukuba ukugcwala okuphuma kwifowuni yakho kufihliwe kwaye kusetyenziswa iindlela ezimbini ezizimeleyo zokuhambisa i-intanethi ukuze kungabikho mntu unokusebenzisa idilesi ye-IP, indawo okuyo kunye nomsebenzi wakho wokukhangela ukwenza iprofayile eneenkcukacha ngawe.
IOS 15 iya kukhutshwa kunye neli phepha njenge-beta kawonke-wonke
Ummangaliso utsibe ngokumiliselwa kwe-beta yesixhenxe ye-iOS kunye ne-iPadOS 15. Kuyo, ICloud Private Relay ikhutshaziwe ngokungagqibekanga kananjalo nombhalo omtsha obeka umsebenzi kwifom ye-beta. Oko kukuthi, umsebenzi onje ngokusuka kukhetho olunikwe amandla ngokungagqibekanga ekusebenzeni okukhubazekile ngaphambili kuxhomekeke kuvavanyo lwe-beta.
Kungenxa yokuba abaphuhlisi babone ukusebenza kunye neengxaki zokufikelela kwezinye iiwebhusayithi zisebenzisa i-iCloud yangasese edlulisiweyo. Ngapha koko, oku kwachazwa kwinqaku elisemthethweni leendaba ze-beta 7:
ICloud Private Relay iya kukhutshwa njenge-beta kawonkewonke yokuqokelela ingxelo eyongezelelweyo kunye nokuphucula ukuhambelana kwewebhusayithi. (82150385)
Isiphelo sale ndlela yokuhamba sinesiphelo esimnandi ngakumbi kunokwabelana ngeSabeloPlay. Lo msebenzi wokugqibela awuyi kukubona ukukhanya kuguqulelo lokugqibela lwe-iOS 15 kodwa kuya kuthi, kwi-iOS 15.1. Kwimeko ye-iCloud Private Relay ewe kuya kubona ukukhanya kwi-iOS 15 njengenguqulelo yokugqibela, ubuncinci okwangoku, kodwa ngophawu lokuba iseyinto evavanyiweyo kwaye iphantsi kwe-beta yoluntu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iOS » iOS 15 » ICloud Private Relay iba yinto ye-beta kwi-beta yamva nje ye-iOS 15
UGoogle angahlawula iApple i-15.000 yezigidigidi zeedola ukuze ihlale iyinjini yokukhangela emiselweyo
Inqaku lesibini lokuvuza ngokuchanekileyo kwi-7mm Apple Watch Series 45